Yiziphi izindleko ezikhokhelwa intela emnothweni wakho? Ezezimali Zomnotho
Sizokutshela nge- izindleko ezivame ukudonswa Lokho ungafaka esitatimendeni sanyanga zonke sabantu abazisho ngokwabo emholweni.
Mayelana ne- izinhlinzeko zentela. Imininingwane esizoyinikeza kulokhu okuthunyelwe, lapho kufanele njalo ucele i-invoyisi futhi ingasetshenziswa ukunquma izintela zanyanga zonke noma eziya kabili ngenyanga kuya ngecala ngalinye.
Akwanele nje kuphela cela i-invoyisi yezindleko ukuthi sizokukhombisa ngokulandelayo, kufanele futhi uhlangabezane nezimfuneko ukuze ukukhishwa kwakho kufaneleke nokuthi ngale ndlela ukhokhe intela encane ngesikhathi isitatimende semali engenayo.
Lolu hlu lunolwazi kuphela futhi lungaba njalo faka isicelo sabo bonke abantu bemvelo ngaphandle kwalokhu kukhishwa kunqunyelwe emsebenzini wakho othize. Endabeni yomsebenzi othile, uhlu lungaba lude. Njalo lapho ukhokha kunoma iyiphi indawo ehlangabezana nezidingo ezidingekayo ukuze kudonswe imali noma nanoma yiluphi uhlobo lwezindleko, kufanele zivunyelwe ngama-invoice afakazela izindleko.
1 Izidingo zokufaka ukukhishwa:
1.1 1. Lezo ezidingeka ngokuqinile ukwenza umsebenzi.
1.2 2. Kufanele ube ne-invoyisi yoqobo bese kuthi i-invoyisi kufanele ukuthi yenzelwe izindleko ezizodonswa
1.3 3. I-invoyisi kumele ibe nezidingo zezimali ezihambisanayo esimweni ngasinye.
1.4 4. Kulokhu, inani elingaphezu kwama-euro angama-2.000
2 Izinhlobo zezindleko ezingadonswa
3 Izindleko zesondlo sokuvimbela noma sokulungisa
4 Amaphuzu okungafanele ukhohlwe uma kukhulunywa ngezindleko ezidonswayo
5 Kufanele kubuyekezwe minyaka yonke okungukuncishiswa kwemali okusheshisiwe.
Izidingo zokufaka ukukhishwa:
1. Lezo ezidingeka ngokuqinile ukwenza umsebenzi.
Kulokhu, kunamaphuzu amathathu ahlukene okufanele acatshangelwe lapho kunqunywa ukuthi izindleko zibaluleke ngokuphelele noma cha:
Okokuqala ukuthi kuhlobene nebhizinisi lakho
Okwesibili kulapho kwakudingeka ukufeza izinhloso ezithile zebhizinisi lakho
Okwesithathu kulapho kwenzeka khona, kungathinta umsebenzi webhizinisi noma kuvimbele umsebenzi.
2. Kufanele ube ne-invoyisi yoqobo bese kuthi i-invoyisi kufanele ukuthi yenzelwe izindleko ezizodonswa
3. I-invoyisi kumele ibe nezidingo zezimali ezihambisanayo esimweni ngasinye.
4. Kulokhu, inani elingaphezu kwama-euro angama-2.000
Zonke izindleko umuntu wemvelo afuna ukuzidonsa inqobo nje uma inani lingadluli kuma-euro ayizi-2.000 XNUMX kufanele zikhokhwe ngesheke lokuphakanyiswa kwi-akhawunti yomzuzi. Kungaba futhi ngekhadi lesikweletu noma ngokudluliswa kwebhange.
Izinhlobo zezindleko ezingadonswa
Por ukuqashwa kwendawo noma indlu yokuhweba, nazo izakhiwo. Inani lerenti okuhlala kulo umuntu wemvelo lingadonswa inqobo nje uma kuhlangatshezwane nalezi zidingo ezingenhla.
Uphethiloli masonto onke noma ngenyanga. Kulokhu, uphethiloli kufanele ukhokhwe ngesheke lokuqokwa futhi kufanele ubuze ngesikhathi lapho isikhungo sikunikeza i-invoyisi ethi "inkokhelo ngekhadi"
Imali yasendlini kanye nomakhalekhukhwini. Umthethosivivinywa wefoni ungadonswa inqobo nje uma kwethulwa ubufakazi bokukhokha noma obudonswa ngqo. Ama-recharges omakhalekhukhwini nawo angadonswa, inqobo nje uma kwethulwa i-invoice ehambisanayo.
Izindleko zezindleko zikagesi emsebenzini. Umthethosivivinywa kagesi ungadonswa uma kwethulwa ubufakazi bokukhokha noma bokukhokha ngqo.
Ungakwazi donsela ikhuri nepasela emsebenzini. Uma kwenzeka usebenzisa i-courier, izinsizakalo ze-courier CORREOS, SEUR, DHL, REDPACK, PACKMAIL, FEDEX, njll zingadonswa ngaphambi kwe-invoyisi.
Izinsizakalo zokuqapha. Izinsizakalo zokuqapha ngaphakathi kwendawo noma yiluphi uhlobo lwehhovisi zingadonswa.
Izindleko zokuhamba ngaphezulu kwamakhilomitha angama-50 ukuzungeza kusuka emsebenzini. Ngaphakathi kwezindleko zokuhamba kungadonswa amaphuzu amaningana. Lokhu kufaka izindleko ezitholwe emadokodweni, amathikithi amabhasi namabhanoyi nokulala, inqobo nje uma ingekho kanokusho. Ukusetshenziswa kokudla nokuqasha imoto lapho uya khona nakho kungadonswa lapho kunesidingo. Ngaphezu kwalokho, uphethiloli ozosetshenziswa ungangezwa kulolu hlobo lwezindleko ezingadonswa.
Kulokhu, izindleko ezidonselwayo yilezo ezinikezwe abantu abazothatha uhambo lokuya endaweni engeyona lapho basebenza khona. Ukuze ubhekwe njengezindleko ezidonswayo ohambweni ngalunye, kufanele ube nebanga okungenani lama-50 km ukuzungeza futhi ube namarisidi wakho konke okusetshenzisiwe kulolu hambo.
Izindleko zesondlo sokuvimbela noma sokulungisa
Ungadonsa ifayili le- izindleko zezinto zokuhlanza. Kulokhu, kufanele ikhokhwe esigabeni esingeyona eyokudla, lokhu kungenxa yokuthi iphenti alidonswa uma iphenti lihlanganiswa nemikhiqizo yokuhlanza, ngakho-ke kufanele kucelwe ama-invoice ahlukile, uma kwethulwa i-invoyisi ehlangene, ngeke idonswe.
Ama-complements wamakhompyutha wanoma yiluphi uhlobo. Zonke izesekeli zekhompyutha noma izesekeli ezidingekayo (kusuka kuphrinta kuya kwimemori khadi) zingadonswa ngokwethula i-invoyisi.
Ukukhangisa noma izithombe ngenhloso yokufinyelela. Ungadonsa zonke izindleko ezikhiqizwayo ezihlobene nokukhangisa noma nganoma yimuphi umkhiqizo ukufinyelela umphakathi.
Noma iziphi izindleko ezithathwe ku- isevisi yamakhasimende kungadonswa uma unayo i-invoyisi
Izindleko zokudlela ngezikhathi zokusebenza. Kuleli qophelo, kufanele kubhekwe ukuthi kuphela u-8,5 ozodonswa noma nini lapho umuntu esebangeni elingaphezu kwamakhilomitha angama-50 ezungeze indawo yalowo okhokhintela. Ukuze ukubanjwa kwenziwe ngendlela efanele, inkokhelo kufanele yenziwe ngo-100% ngekhadi lesikweletu noma lasebhange. Ukusetshenziswa kwemigoqo noma iziphuzo ezidakayo ngeke kudonswe.
Ukuqeqeshwa kwabasebenzi. Kulokhu, ukuqeqeshwa okusetshenziselwe ukukhulisa amandla abasebenzi bendawo kungadonswa, inqobo nje uma kuthiwe abasebenzi babhalisiwe nabezenhlalakahle.
Izinto ezidingekayo kunoma yimuphi umsebenzi. Lolu hlobo lwezinsizakusebenza lungadonswa inqobo nje uma leyo nto ivela kulayini webhizinisi lenkampani futhi ingaze isetshenziselwe ukusetshenziswa kwangaphandle.
Noma yikuphi uhlobo lwezindleko zokufaka. Kulokhu, yizinto ezitholakala ezingutsheni nezicathulo ezingadonswa kuphela kulokho umkhokhi wentela azithengele kona. Kuleli qophelo, izindleko ezenziwe ngabakhuphuka noma inzalo yakho azidonsi.
Iholo labasebenzi. Ukuze kudonswe amaholo abasebenzi, kumele babhaliswe nabezenhlalakahle.
Imali ekhokhwayo. Lapho izinkokhelo ezikhokhelwa ochwepheshe zenziwa enkampanini, njengommeli noma i-accountant, zingadonswa. Kumele kuqashelwe ukuthi imali ekhokhwayo ikhiqiza izinhlobo ezimbili zokubanjwa, eyokuqala ingu-10% kuthi eyesibili ibe yizingxenye ezimbili kwezintathu ze-VAT.
Izindleko ezincwadini, kumakhophi noma kunoma yiziphi ezinye izindleko zokubhala. Zonke izindleko zokubhala zibonakala njengezindleko ezincane kuze kufakwe yonke imali. Njengoba engamakati amancane kakhulu, izitolo eziningi zokubhala azifuni ukunikeza ama-invoice, noma kunjalo, amathikithi angaqoqwa futhi uma kuyimali ephezulu, buyela bese ucela ukuthi kwenziwe i-invoyisi ngayo yonke imali esetshenzisiwe ngesikhathi inyanga ebhizinisini elishiwoyo.
Izimali ezikhokhelwa izinyunyana noma okunye okutholakala ngalolu hlobo. Kulokhu, iminikelo evela kuzinyunyana noma omunye umgwamanda onjengezinhlangano zobungcweti noma izimboni ezithile ingatholwa.
Noma yiluphi uhlobo lwezindleko zezezimali. Lolu hlobo lwezindleko lwenziwa lapho ibhange lisikhokhisa amakhomishini.
Noma yiluphi uhlobo lwe umnikelo emagcekeni. Leli inani elikhokhwa minyaka yonke nganoma yiluphi uhlobo lwempahla. Iminikelo eyenzelwe izakhiwo nezakhiwo iphakeme kakhulu emadolobheni.
Iminikelo eyenziwe enteleni. Iminikelo eyenziwe ukukhokha intela engu-3%. Ungakhipha futhi inkokhelo ezimotweni noma inkokhelo yesicelo samapuleti. Futhi ungadonsa noma yiluphi olunye uhlobo lokukhokha oluzokwenziwa kunobhala wezezimali noma ibhizinisi elibhekwa njengomkhokhi wentela.
Iminikelo yezinhloso ezijwayelekile. Lezi zinhlobo zeminikelo yizinkokhelo ezenziwa kwezokuphepha komphakathi kanye nomshuwalense noma izinzuzo zomphakathi. Ezinye izinkokhelo azidonswa, njenge-VAT.
Amaphuzu okungafanele ukhohlwe uma kukhulunywa ngezindleko ezidonswayo
Njalo lapho ukhokha kunoma iyiphi indawo ehlangabezana nezidingo ezidingekayo ukuze kudonswe imali noma nanoma yiluphi uhlobo lwezindleko, kufanele zivunyelwe ngama-invoice afakazela izindleko.
Kufanele kubuyekezwe minyaka yonke okungukuncishiswa kwemali okusheshisiwe.
Zonke izindleko kubuchwepheshe obusha maqondana nomakhalekhukhwini noma i-inthanethi kumele zinakwe. Zonke izindleko ezihlobene nophethiloli nazo kumele zinakwe. Futhi, inani elihle le-VAT lingadonswa ekubuyiselweni kwentela.
Indlela ephelele ye-athikili: Ezezimali Zomnotho » Ipolitiki yezomnotho » Inqubomgomo yezimali » Izindleko ezidonswayo
Ngabe ufuna ukutshala imali ngokwendlela yakho yokucabanga?